Tsipy kanetibe: nanao ampamoaka i Dolys, mpanazatra ny ekipam-pirenena | NewsMada
Tsipy kanetibe: nanao ampamoaka i Dolys, mpanazatra ny ekipam-pirenena
Vaky tanteraka ny ady eo amin’ny federasiona malagasin’ny tsipy kanetibe (FMP) sy Randriamarohaja Dolys, mpanazatra ny ekipam-pirenena. Nanao ampamoaka, tamin’ny mpanao gazety, ity farany mikasika ny goragora eo anivon’ny FMP.
Nahitsy ary tsy nitsitsitsitsy fitenena mihitsy Randriamarohaja Dolys, mpanazatra ny ekipam-pirenena malagasin’ny tsipy kanetibe, raha namboraka ny zava-tsy mety eo amin’ny fitantanana ny federasiona malagasin’ny tsipy kanetibe. Nanao ampamoaka zato isan-jato tamin’ny mpanao gazety izy, ny asabotsy lasa teo teny Mahamasina.
Notsinkafoniny ny resa-bola tena fototry ny olana. Anisan’izany ilay “prime” 10 tapitrisa Ar, nomen’ny fitondrana ho an’ireo sokajy “junior”, nandrombaka ny tompondaka eran-tany 2017. Hatreto, vao ny 6 tapitrisa Ar ny azon’ireo mpilalao fa tsy hita nanjavonana ny ambiny.
Ankoatra izay, olana goavana teo amin’ny delegasiona malagasy niatrika ny fiadiana ny ho tompondaka eran-tany, natao tany Sina tamin’ny taon-dasa, tena nanala baraka satria tsy nisy na ny fitaovana hilalaovan’ireo mpilalao aza, nefa tokony ho ny federasiona ny miantoka azy. Tetsy ankilany, tsy naloan’ny federasiona malagasy ny vola nivahiniana tany Sina ka saika nanongotana ny anaram-boninahitra azon’ny Malagasy. “Soa ihany fa teo i Claude Azema, filohan’ny federasiona iraisam-pirenena, nanefa izany fa raha tsy izay, notazomin’ny fanjakana sinoa tsy navelany nody ny ekipam-pirenena malagasy”, hoy i Dolys.
Nitady vola ho an’ny ekipam-pirenena
Izay ny ambangovangony teo amin’ny resa-bola, nasiany resaka ihany koa ny kitoatoa teo amin’ny fandrindrana ny ekipam-pirenena. “Efatra andro mialoha ny niaingana ho any Tonizia, hiatrika ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika, vao nilaza tamiko ny filohan’ny federasiona fa raha te hiatrika izany ny Malagasy, mila mitady 45 tapitrisa Ar. Voatery ny tenako nikaroka tamin’ireo namana izay isaorana eto ka nahafahan’ny ekipam-pirenena nandeha niatrika izany. Soa ihany fa azontsika ny anaram-boninahitra ka naverin’ny federasiona io vola io. Ny mahagaga ahy, inona fotsiny ny antom-pisian’ny federasiona ka ny mpilalao sy ny mpanazatra no asain’izy ireo mitady vola hiatrehana izany lalao izany”, hoy i Dolys.
Noho ny filazany ireo tranga sy ny zava-tsy mety ao amin’ny federasiona ireo, manangasanga ny sazy ho an’ity mpanazatra nahazo anaram-boninahitra betsaka indrindra ity. “Hatreto, tsy mbola naharay taratasy mahakasika izany aho fa tamin’ny alalan’ny haino aman-jery no nahitako fa hosazina ny tenako. Ny filazako ny marina ve no hanasaziana ahy?”, hoy izy namarana ny dinika.